४ तस्विरमा हेर्नुस् , यी हुन् २०१९ मा बलिउडमा आगो लगाउने सुन्दर अभिनेत्रीहरु ! – Medianp
४ तस्विरमा हेर्नुस् , यी हुन् २०१९ मा बलिउडमा आगो लगाउने सुन्दर अभिनेत्रीहरु !
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २६, २०७५१३:०९
काठमाडौ । प्रत्येक वर्ष बलिउडमा धेरै अभिनेत्रीहरु नयाँ फिल्मको साथमा स्टार अभिनेतासँग डेब्यु गर्ने तयारीमा हुन्छन् । जसले गर्दा त्यस समय सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा निकै ठुलो चर्चा हुन्छ । यसपालि पनि (२०१९ )मा केही नयाँ अभिनेत्रीहरु बलिउडमा डेब्यु गर्ने तयारीमा छन् । जसको अहिले मिडियाहरुमा चर्चा भइरहेको छ । को को हुन् ?हेर्नुस्
अनन्या पाण्डे अभिनेत्री अनन्या यो वर्षबाट एक फिल्मबाट बलिउडमा डेब्यु गर्ने तयारीमा छिन् । उनी चंकी पाण्डेकी छोरी हुन् । भारतीय मिडियाहरुको अनुसार उनी फिल्म स्टूडेन्ट फ द ईयर २’ बाट बलिउडमा डेब्यु गदैछिन् । यस फिल्ममा अभिनेता टाइगर श्राफ पनि रहेका छन् ।
तारा सुतारिया कुनै समय बाल कलाकारबाट आफ्नो अभिनय यात्राको सुरुवात गरेकी तारा पनि यही वर्ष नयाँ फिल्म मार्फत बलिउडमा डेब्यु गदै छिन् । केही जानकारीको अनुसार उनी पनि फिल्म स्टूडेन्ट फ द ईयर २’ बाटै बलिउडमा अभिनेत्रीको रुपमा प्रवेश गदैछिन् ।
इसाबेल कैफ इसाबेल कैफ कटरीना कैफकी कान्छी बहिनीको रुपमा एक समय चर्चामा आएकी थिइन् । त्यसपछि बलिउडमा उनको चर्चा हुन थाल्यो । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार इसाबेल अहिले स्टेनली डी’कोस्टा द्वारा निदेर्शित फिल्म टाइम टू डान्सबाट डेब्यु गदैछिन् ।
प्रनूतन बहल अभिनेत्री प्रनूतन बहल मोहनीश बहलकी छोरी हुन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उनी फिल्म नोटबुकमार्फत स्टार अभिनेता जहीर इकबालसँगै बलिउडमा डेब्यु गदैछिन् । यस फिल्ममार्फत सलमान खानले जहीर इकबाल र प्रनूतन बहललाई एक साथ प्रस्तुत गदैछन् ।
जब मन्त्रीले खोले धाराको टुटी …
यी हुन् प्यारासुट नखुलेपछि ६ हजार फिट माथिबाट खसेर मृत्यु भएका सैनिक , दर्दनाक भिडियो